Kernel 4.19 inowedzera yakagadziriswa faira kuwana uye GPS subsystem | Linux Vakapindwa muropa
Kernel 4.19 inowedzera yakagadziriswa faira kuwana, GPS subsystem uye nezvimwe
Chii chichaitika iyo itsva Linux kernel vhezheni 4.19 ichiri kuitika uye vagadziri vayo vari kushanda nesimba uye mazuva ano basa ravo rakawedzera zvakapetwa semaburi ekuchengetedza muzvirongwa zvazvino vanochengeta vanogadzira Linux kernel vakabata uye vanoita Linus Torvalds mune yakashata mamiriro.
Uyewo, iyo 4.19 yekuburitsa mukwikwidzi inounzawo GPS subsystem uye dzakasiyana siyana zvinowedzerwa zvefaira uye network kuwana.
1 Iko kernel kuvhurwa kunogona kunonoka here?
2 Maitirwo matsva mushanduro nyowani yeKernel 4.19
Iko kernel kuvhurwa kunogona kunonoka here?
Musoro wetsanga, Linus Torvalds, akarondedzera yazvino budiriro kutenderera se "inoshungurudza" kwete nekuda kwemakomba ekuchengetedza achangobva kuziviswa. Linux 4.19 panguva imwechete yakaburitswa zvakakwana.
Linux kernel peji tafura yekuzviparadzanisa patches inochengetedza 64-bit masisitimu pakurwisa kubatanidza gap, nepo Kernel 4.19 inogamuchira zvakare zvigamba zve 32-bit masisitimu.
Uyewo, Aya matsva ekutanga ekufananidzira ekuchengetedza mabugs akamhanyisa zvigamba.
Kuburikidza navo, maitiro anogona kushandisa chikamu 1 cache yeIntel CPUs kuverenga mune isingabvumirwe ndangariro.
Ichi ine njodzi zvakanyanya munzvimbo dzakasarudzika uko masisitimu evaenzi anokwanisa kuwana kuMubati Kuti uwane iyo yakakodzera wachi wachi yeiyo CPU, iyo Linux kernel inoshandisa scheduler.
Saka vagadziri vakawedzera yavo algorithm kuti vanyore iyo nguva inodiwa yeiyo chaiyo-nguva maitiro, kukanganisa, uye kugadzirisa iyo CPU nguva zvinoenderana.
Panguva imwecheteyo, iyo interface yekutsvaga asynchronous I / O (Asynchronous I / O Poll Interface) inodzokera kuLinux kernel.
Linus Torvalds yaive nekodhi yakadzokororwa mukutanga kupinda muLinux 4.18 uye haina kugutsikana. Zvichakadaro, yakabhururuka ichibva pakati.
Panguva ino, Greg Kroah-Hartman anofara nezve itsva GPS subsystem iyo yakaverengerwa mutsanga.
Izvi zvinofanirwa "kudzora madhiraivha ese anopenga ave achifamba nendege kwemakore, pamwe nekumwe kuita kwekushandisa-nzvimbo kuita."
Maitirwo matsva mushanduro nyowani yeKernel 4.19
Parizvino kodhi iyi inokodzera chete vanogamuchira veGNSS (chidimbu chinoratidza iyo Global Navigation Satellite System), asi uku ndiko kutanga kwakanaka.
Zvakare yeFSI Controller Subsystem (Flexible Support Interface), Kroah-Hartman akawana mazwi ekurumbidza.
Iko kune itsva subsystem yeiyo yakakwira fan kuburitsa serial bhazi, ine yakakwira fan fan kuburitsa inoreva kugona kwekukamura dhijitari chiratidzo kune akawanda anogamuchira.
Basa rekuchenesa rakawira pasi kuJprobes, kernel function call trace mashini. Izvozvi yatsiva Ftrace.
Nematanho aya matsva eiyo netiweki stack, ivo Linux kernel vanogadzira vanounza iyo yenguva-yakavakirwa packet kufambisa basa mune ichave iri nyowani vhezheni
Ichi inobvumira nguva yenguva iyo iyo kernel inofanirwa kutumira mapaketi ered. Inonyanya kuitirwa chaiwo-nguva masisitimu, semuenzaniso mumunda wekugadzira mota.
Ikoko kunofanirwa kuve nekuvimbika kutapurirana kwedata uye, kunyanya, kudzivirira mapaketi kubva kunonoka kusvika kwavanosvika. Basa racho rinotevera iyo P802.1Qbv network yakajairwa.
Vagadziri vacho vari kushanda paCake (Zvakajairika Zvikumbiro Zvinochengetedzwa,) zvinodaidzwa kuti Patchset nenyaya dzekusiya kumashure kwema routers mudzimba network.
Keke inogara yakanangana ne network network uye inosarudza kuti ndeapi mapakeji anogona kumhara pane protocol interface.
Mutsara unogadziriswa neCake wakagadzirirwa kudzivirira kunyanyisa kubopota uye latency nyaya nekushandisa nzira dzakasiyana siyana. (senge diffserv kuongororwa, algorithm yakaringana, uye ACK firita).
Keke inonyanya kuitirwa kuti ishandiswe muma routers, seLinux-based Open WRT yemahara firmware kutsiva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kernel 4.19 inowedzera yakagadziriswa faira kuwana, GPS subsystem uye nezvimwe
Google Chrome inoda kuwedzerwa kwakachengeteka kwevashandisi
Slimbook izvozvi zvakare ne AMD processor